Detection kit for sy - Englisch - Burmesisch Übersetzung und Beispiele
Sie suchten nach: detection kit for systemic lupus erythe... (Englisch - Burmesisch)
If there areasmall number of cases, this may assist in developingatest kit for patients to take to their own GP and explore its acceptability to patients.
ဖြစ်စဉ်အရေအတွက်အနည်းငယ်ရှိပါက၊ ၎င်းသည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင် GP ကိုရယူကာ လူနာများတွင် ၎င်း၏လက်ခံနိုင်စွမ်းကို စူးစမ်းရန် လူနာများအတွက် test kit တစ်ခုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
ဤပြင်ဆင်ချက်များသည် မြန်ဆန်သော ရှာဖွေမှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံး နျူကလစ် အက်ဆစ် ထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းကို ရှာဖွေရန် သုတေသီများ၏ ဆက်တိုက်လုပ်ကိုင်မှုအပြင် သွေးနမူနာယူခြင်း အပါအဝင် မတူညီသော နမူနာများ ရနိုင်မှုကို တိုးပွားစေသည့် အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှ နမူနာများအပေါ် အခြေခံပြီး အတည်ပြု စံသတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ အထူးသီးသန့် ပဋိပစ္စည်း ရလဒ်ကောင်းကို ယူဆောင်လာရန် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
ယူနိုက်တစ် ကင်းဒမ်းသည်လည်း 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 23 ရက်တွင် စမ်းသပ်မှု တစ်ခုကို ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ တောင်ကိုရီးယား ကုမ္ပဏီ Kogenebiotech က ကုသမှု အဆင့် PCR-အခြေပြု SARS-CoV-2 ရှာဖွေမှု ပစ္စည်း တစ်စုံကို 2020 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 28 ရက်တွင် ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
One of the early PCR tests was developed at Charité in Berlin in January 2020 using real-time reverse transcription polymerase chain reaction (rRT-PCR), and formed the basis of 250,000 kits for distribution by the World Health Organization (WHO).
ဇန်နဝါရီလ 2020 တွင် ဘာလင်မြို့ရှိ Charité ၌ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပေါ်လီမာရေ့စ် ကွင်းဆက် ပြောင်းပြန်ကူးယူ ဓါတ်ပြုမှု (rRT-PCR) ကို အသုံးပြု၍ အစောပိုင်း PCR စမ်းသပ်မှု တစ်ခုကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့အစည်း (WHO) ၏ ဖြန့်ဝေမှုအတွက် စမ်းသပ်ကိရိယာ 250,000 ကို အခြေခံအဖြစ် ဖော်ထုတ်ပေးခဲ့သည်။
hailwampio (Walisisch>Englisch)žolinės (Litauisch>Englisch)bulisani (Xhosa>Swahili)di rin siya nakakapagsalita ng inglis (Tagalog>Englisch)io ti cerco (Italienisch>Englisch)felling horne (Englisch>Tagalog)edi sayo na (Tagalog>Englisch)bore da fy annwyl (Walisisch>Englisch)para bumalik ka sa akin (Tagalog>Englisch)pantun budi bahasa dalam tamil (Malaysisch>Tamilisch)sukatan sudu (Malaysisch>Englisch)ndenzele inceba mhlobam yenza utshintsho ayisoze (Xhosa>Englisch)peti harta karun (Malaysisch>Englisch)przekór (Polnisch>Russisch)tanti auguri di buon onomastico (Italienisch>Englisch)napag alaman ko (Tagalog>Englisch)যায় (Bengali>Hindi)hichi meaning (Japanisch>Englisch)nag alaga ng matanda (Tagalog>Englisch)anh ngu ngon (Vietnamesisch>Englisch)endinako (Xhosa>Englisch)painting canvas (Englisch>Tagalog)medyo (Tagalog>Englisch)er mwyn dyn (Walisisch>Englisch)er dog (Dänisch>Englisch)